» “कांग्रेस भित्र किचलो ,कोइराला, सिंह र निधिको एकता खलबल्याउन देउवाद्वारा अस्त्र तयार” “कांग्रेस भित्र किचलो ,कोइराला, सिंह र निधिको एकता खलबल्याउन देउवाद्वारा अस्त्र तयार” – हाम्रो खबर
“कांग्रेस भित्र किचलो ,कोइराला, सिंह र निधिको एकता खलबल्याउन देउवाद्वारा अस्त्र तयार”
“काठमाडौं, ११ असार । नेपाली काँग्रेसभित्र नयाँ ध्रवीकरणको सम्भावना बढेर गएको छ । यसअघि संस्थापन पक्ष र इतर खेमामा विभाजितहरु परिवर्तित हुन थालेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि नेतृत्वका लागि अगाडि बढ्न लागेका छन् । तर, उनकै खेमाका केही नेताहरुले साथ छाडेपछि अप्ठ्यारोमा छन् ।
देउवालाई उपसभापति, विमलेन्द्र निधिले साथ छाडेका छन् । उनी आफै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा बढेका छन् । त्यसका लागि देउवाइतर समूहका प्रभावशाली नेताहरुसँग भेटघाट तिव्र पारेका छन् । निधिले विगतमा पनि देउवालाई देखाइदिने चेतावनी दिएका छन् ।
“अहिले नेपाली काँग्रेसभित्र देउवाविरुद्ध काँग्रेसको शक्तिशाली तीन नेताहरु विमलेन्द्र निधि, डा. सशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह एक भएर भदौमा हुने महाधिवेशनमा जाने सहमति विकास गरिरहेका छन् । उनीहरुले बाहिर थाहा दिएरै दुईपटक भेटघाट गरिसकेका छन् । अब छिट्टै तेस्रो भेट गर्ने तयारी गरेका छन् ।
कोइराला परिवार, सिंह परिवार ,र निधि परिवार बलियो शक्ति हो । यी तीन परिवारलाई विरासतको राजनीति गर्दै आएको मानिन्छ । अब तीन परिवार एक भएर काँग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनको पहल गर्न थालेकाले देउवा चिन्तामा परेका हुन् ।
डा. सशांक कोइराला, प्रकाशमान ,सिंह र विमलेन्द्र निधि तीनैजना नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेताहरुका पुत्र हुन् । उमेरले ६ दशक पार गरेका तीनैजना काँग्रेस सभापतिका दाबेदार हुन् । तर, तीनजना नमिलेमा शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा पराजित गर्न सकिदैन भन्नेमा जानकार छन् । कोइराला, सिंह र निधिलाई काँग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने नमिली सुखै छैन । तर, मिल्न सजिलो भने छैन । किनकि तीनमध्ये दुईले त्याग नगरी सभापतिमा बलियो उम्मेदवार बन्न कठिन छ ।
देउवाले पनि तीनजना,लाई मिल्न नदिने अस्त्र तयार पारेका छन् । तीनजना नेताहरु नमिल्नेमा उनी ढुक्क छन् । मिल्न नदिने अस्त्र र मिलेमा चाल्ने अस्त्र समेत देउवाले तयार पारेको बुझिएको छ ।
निधिले साथ छाडिसकेकाले देउवाले डा. सशांक कोइराला या प्रकाशमान सिंहमध्ये एक नेतासँग पावर सेयरिङ गरेर कुरा मिलाउने पूर्वतयारी गरिसकेको बुझिएको छ । कोइरालालाई गत महाधिवेशनमा देउवाले भित्री रुपमा महामन्त्री जिताउन, साथ दिएको चर्चा चलेको थियो । संसदीय दलको नेतामा सशांक कोइरालाले प्रकाशमान सिंहलाई मत दिएका थिएनन् । यसैको फाइदा देउवाले उठाउन सक्ने बुझिएको छ ।
प्रकाशमान सिंह विगतमा, देउवा खेमाकै थिए । उनले साथ छाडेर तत्कालीन नेता सुशील कोइरालालाई साथ दिएका थिए । कोइराला सभापति जितेका थिए भने सिंह महामन्त्री । अब देउवाले पनि सशांक या प्रकाशमानमध्ये एकलाई साथमा ल्याउनेतर्फ ध्यान बढाइसकेको बुझिएको छ ।
निधि, कोइराला र सिंह एक भएमा देउवाको विकल्प रामचन्द्र पौडेलसँग पावर सेयरिङ पनि हुनसक्छ । कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि साथ लिनसक्ने विकल्प छ ।
“कोइराला परिवार भित्रकै डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालालाई साथ लिएर जानेतर्फ पनि देउवा बढ्न सक्छन् । तर, सुजाता देउवाको पक्षमा जाने सम्भावना कम छ । अब आफूविरोधी समूहलाई एक हुन नदिन देउवा जोडतोडले लागेका छन् । महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा यो प्रयास घनीभूत बन्दै जाने देखिएको छ ।”